(trg)="2"> MAGAZINI INO yeNharireyomurindi , inorumbidza Jehovha Mwari , Mutongi wezvinhu zvose .
(trg)="3"> Inonyaradza vanhu nemashoko akanaka okuti Umambo hwaMwari huri kudenga , hwava pedyo nokugumisa uipi hwose , hwochinja pasi rino kuti rive paradhiso .
(trg)="6"> Zvainotaura zvose zvinobva muBhaibheri .
(trg)="7"> Magazini ino haitengeswi .
(trg)="8"> Ndeimwe yemabhuku anoshandiswa pabasa rokudzidzisa Bhaibheri munyika yose uye basa iri rinotsigirwa nezvipo .
(trg)="9"> Magwaro anobva muShanduro yeNyika Itsva yeMagwaro Matsvene , kunze kwokunge pataurwa kuti pane pamwe paatorwa .
(trg)="1"> NYAYA IRI PAKAVHA
(trg)="2"> “ Mwari ndiye anoziva zvakatinakira ufunge . . . .
(trg)="3"> Chirega . . . kuchema . ”
(trg)="4"> Mashoko aya akazevezerwa kune mumwe mukadzi anonzi Bebe .
(trg)="5"> Mukadzi uyu akanga ari parufu rwababa vake vakanga vafira mutsaona yemotokari .
(trg)="6"> Bebe aiwirirana nababa vake chaizvo .
(trg)="7"> Mashoko aya akaaudzwa neshamwari yepedyo yemhuri yavo uye izvi zvakarwadza Bebe pane kumunyaradza .
(trg)="8"> Mumwoyo make Bebe aingozviudza kuti , “ Hapana kana chakambonaka nekufa kwababa vangu . ”
(trg)="9"> Zviri pachena kuti Bebe paakazonyora nezvenyaya iyi mune rimwe bhuku patopera makore , akanga achiri kushungurudzika .
(trg)="10"> Bebe akazoona kuti zvinotora nguva kuti kushungurudzika kuzopera , kunyanya kana anenge afirwa anga achinyatsowirirana nemufi wacho .
(trg)="11"> Ndokusaka Bhaibheri richiti rufu “ muvengi wokupedzisira . ”
(trg)="12"> Rufu rwunongoerekana rwauya , kunyanya paye patinenge takarivara , uye rwunotitorera vanhu vatinoda .
(trg)="13"> Tose zvedu tinorwadziwa patinofirwa .
(trg)="14"> Saka zviri pachena kuti patinofirwa tinenge tarasikirwa uye tinosara tichishungurudzika .
(trg)="15"> Zvimwe wakambozvibvunza kuti : ‘ Zvinotora nguva yakadii kuti kushungurudzika kuzopera ?
(trg)="16"> Chii chingabatsira munhu paanenge achishungurudzika ?
(trg)="17"> Ndinganyaradza sei vamwe vanenge vafirwa ?
(trg)="18"> Pane tariro here yokuti hama neshamwari dzedu dzakafa dzichazomuka ? ’
(trg)="1"> NYAYA IRI PAKAVHA | PAUNOFIRWA NEMUNHU WAUNODA
(trg)="2"> Wati wamborwara kwenguva pfupi here ?
(trg)="3"> Zvimwe wakakurumidza kupora zvekuti wakabva watokanganwa nezvazvo .
(trg)="4"> Izvi zvakasiyana nezvinoita kushungurudzika .
(trg)="5"> Dr Alan Wolfelt mubhuku rake rinonzi Healing a Spouse’s Grieving Heart akanyora kuti : “ Kushungurudzika hakumboperi . ”
(trg)="6"> Akawedzerawo kuti : “ Kufamba kunenge kuchiita nguva uye kubatsirwa kwaunenge uchiitwa nevamwe kunoita kuti unzwe zviri nani . ”
(trg)="7"> Chimbofunga zvakaitwa naAbrahamu paakafirwa nemudzimai wake .
(trg)="8"> Mumutauro wakashandiswa kunyora Bhaibheri pakutanga zvinonzi , “ Abrahamu akatanga kuchema Sara achisvimha misodzi . ”
(trg)="9"> Shoko rokuti “ akatanga ” rinoratidza kuti Abrahamu akatora nguva achirwadzirwa .
(trg)="10"> * Mumwewo ndiJakobho , uyo akanyeperwa akatanga kufunga kuti mwanakomana wake Josefa akanga aurayiwa nechikara .
(trg)="11"> Akaita “ mazuva mazhinji ” achishungurudzika uye vemumhuri make havana kukwanisa kumunyaradza .
(trg)="12"> Papera makore akati kuti , Jakobho akanga achiri kushungurudzika nerufu rwaJosefa . ​ — Genesisi 23 : 2 ; 37 : 34 , 35 ; 42 : 36 ; 45 : 28 .
(trg)="13"> Abrahamu akarwadziwa pakafa mudzimai wake waaida Sara
(trg)="14"> Mazuva ano izvi ndizvo zvinoitawo vaya vanenge vafirwa nehama yepedyo .
(trg)="15"> Ngatimboonai mienzaniso miviri .
(trg)="16"> “ Murume wangu , Robert , akashaya musi wa9 July 2008 .
(trg)="17"> Mangwanani emusi wakaitika tsaona yakamuuraya akanga abva pamba senguva dzose .
(trg)="18"> Sezvataigara tichiita pataipedza kudya kwemangwanani asati aenda kubasa , takatsvodana , tikambundirana uye mumwe nemumwe akabva audza mumwe kuti ‘ ndinokuda . ’
(trg)="19"> Iye zvino atova makore 6 asi ndichiri kungorwadziwa .
(trg)="20"> Handifungi kuti marwadzo angu ekufirwa naRob achazombopera . ” ​ — Gail , ane makore 60 .
(trg)="21"> “ Kunyange zvazvo patopfuura makore 18 kubva pakashaya mudzimai wangu , ndichiri kumufunga uye zvichiri kundirwadza .
(trg)="22"> Pandinongoona chinhu chakasikwa chinoyevedza , ndinobva ndatanga kumufunga uye nechomumwoyo ndinotanga kufungidzira kufara kwaaizoita kudai ari kuona zvandinenge ndichionawo . ” ​ — Etienne , ane makore 84 .
(trg)="23"> Sezvataona kana munhu akafirwa anotorwadziwa uye anoshungurudzika kwenguva refu .
(trg)="24"> Kushungurudzika kwatinoita kwakasiyana , saka hazvina kunaka kuti munhu atonge zvinoitwa nemumwe paanowirwa nedambudziko .
(trg)="25"> Uyewo hatifaniri kuzvipa mhosva kana tichiona sokuti kurwadziwa kwedu kunenge kwakanyanyisa .
(trg)="26"> Chii chingatibatsira patinenge tichishungurudzika ?
(trg)="27"> Isaka mwanakomana waAbrahamu , akamboshungurudzikawo kwenguva refu .
(trg)="28"> Sezviri kuratidzwa munyaya yakanzi “ Tevedzera Kutenda Kwavo ” iri mumagazini ino , Isaka akanga achiri kushungurudzika nerufu rwaamai vake , Sara , makore matatu pashure pekunge vafa . ​ — Genesisi 24 : 67 .
(trg)="2"> Pane mazano akawanda anopiwa nevanhu panyaya iyi .
(trg)="3"> Asi haasi ese anobatsira .
(trg)="4"> Semuenzaniso vamwe vanogona kukuudza kuti usachema kana kutomboratidza kurwadziwa kwaunenge uchiita .
(trg)="5"> Vamwe vanogona kukukurudzira kuti ucheme zvekuchema zviya .
(trg)="6"> Asi Bhaibheri rinotaura zvakasiyana neizvi uye zvarinotaura zvinotsigirwawo neongororo dziri kuitwa mazuva ano .
(trg)="7"> Mune dzimwe tsika zvinonzi kana uri murume haufanire kuchema .
(trg)="8"> Asi pane chikonzero here chekuti munhu anyare kubudisa misodzi , kunyange paruzhinji ?
(trg)="9"> Vaongorori vemashandiro anoita pfungwa vanoti kana munhu achinge afirwa anowanzobudisa misodzi .
(trg)="10"> Uye kuchema kunogona kuzokubatsira kuti unzwe zviri nani pasinei nekurasikirwa kwaunenge waita .
(trg)="11"> Kana munhu akavanza kurwadziwa kwaanenge achiita zvinogona kumukuvadza pane kuti zvimubatsire .
(trg)="12"> Bhaibheri haritsigiri pfungwa yekuti kuchema kwakaipa kana kuti murume haacheme .
(trg)="13"> Semuenzaniso , funga nezvaJesu .
(trg)="14"> Kunyange zvazvo aiva nesimba rekumutsa vakafa , shamwari yake Razaro payakafa , akachema vanhu vachizviona ! ​ — Johani 11 : 33 - 35 .
(trg)="15"> Kazhinji kana munhu akafirwa asingazvitarisiri anoita nguva dzaanombotsamwa .
(trg)="16"> Pane zvikonzero zvakawanda zvingaita kuti munhu anenge afirwa atsamwe .
(trg)="17"> Izvi zvinoitika kana munhu anoremekedzwa akataura asina kufunga uye akataura mashoko asiri echokwadi .
(trg)="18"> Mumwe murume wekuSouth Africa anonzi Mike anoti : “ Baba vangu pavakafa ndaingova nemakore 14 chete .
(trg)="19"> Parufu rwavo mumwe mufundisi weAnglican akati Mwari anoda kuva nevanhu vakanaka uye anokurumidza kuvatora .
(trg)="20"> * Izvi zvakandigumbura nokuti taida chaizvo kuva nababa vedu .
(trg)="21"> Kunyange zvazvo papera makore 63 , zvichiri kundirwadza . ”
(trg)="22"> Ko kana munhu anenge afirwa achizvipa mhosva ?
(trg)="23"> Kana ukafirwa usingazvitarisiri , unogona kuramba uchifunga kuti , ‘ Zvimwe dai ndakaita izvi neizvi angadai asina kufa . ’
(trg)="24"> Kana kuti pawakapedzisira kutaura nemufi wacho makapopotedzana .
(trg)="25"> Izvi zvinogona kuita kuti uwedzere kuzvipa mhosva .
(trg)="26"> Kana uchigara uchizvipa mhosva uye uchimbotsamwa , zvinokosha kuti usakuvarire mukati .
(trg)="27"> Taura neshamwari inogona kukuteerera yokubatsira kuona kuti manzwiro iwayo anowanzoitika kune vakawanda vanenge vafirwa .
(trg)="28"> Bhaibheri rinoti : “ Shamwari yechokwadi ine rudo nguva dzose , uye ihama inoberekerwa kubatsira pakunenge kuine kutambudzika . ” ​ — Zvirevo 17 : 17 .
(trg)="29"> Musiki wedu Jehovha Mwari ndiye anogona kuva Shamwari inopfuura dzose kumunhu anenge afirwa .
(trg)="30"> Nyengetera kwaari uchitaura zvose zvinenge zvichikunetsa nokuti ‘ iye ane hanya newe . ’
(trg)="31"> Anovimbisawo kuti vose vanonyengetera kwaari vachanyatsozorodzwa mupfungwa ‘ nerugare rwaMwari runopfuura kufunga kwose . ’
(trg)="32"> Uyewo , bvumira Mwari kuti akubatsire kuti unzwe zviri nani achishandisa shoko rake rinonyaradza , Bhaibheri .
(trg)="33"> Nyora pasi mavhesi anonyaradza .
(trg)="34"> ( Ona bhokisi . )
(trg)="35"> Zvinogona kukubatsira kana ukabata mamwe acho nemusoro .
(trg)="36"> Kana ukafunga nezvemavhesi akadaro zvichakubatsira chaizvo kunyanya usiku paunenge uri wega uchishaya hope . ​ — Isaya 57 : 15 .
(trg)="37"> Munguva ichangopfuura , murume ane makore 40 , watichati Jack , akafirwa nemudzimai wake pashure pekunge arwara nekenza .
(trg)="38"> Jack anotaura kuti dzimwe nguva anosurukirwa chaizvo .
(trg)="39"> Asi anobatsirwa nekunyengetera .
(trg)="40"> Anoti : “ Pandinonyengetera kuna Jehovha , handizosurukirwi .
(trg)="41"> Ndinowanzopepuka usiku uye hope dzinobva dzaramba kuuya .
(trg)="42"> Pashure pekunge ndaverenga mashoko anonyaradza ari muMagwaro ndofunga nezvawo uye ndonyengetera ndichitaura zvose zvinondinetsa , ndinobva ndatanga kunzwa kugadzikana mumwoyo nemupfungwa uye hope dzinobva dzauya zvekare . ”
(trg)="43"> Musikana anonzi Vanessa akafirwa naamai vake pashure pekunge varwara .
(trg)="44"> Akaonawo kubatsira kunoita kunyengetera .
(trg)="45"> Anoti : “ Zvinhu pazvainge zvakandiomera chaizvo , ndaibva ndanyengetera kuna Mwari ndochema .
(trg)="46"> Jehovha ainzwa minyengetero yangu uye aindipa simba randaida . ”
(trg)="47"> Vamwe vevanopa mazano kune vanenge vafirwa vanokurudzira vanenge vachishungurudzika kuti vazvipire kuita mabasa ekubatsira vanhu munharaunda .
(trg)="48"> Kana vakaita izvozvo vanogona kufara uye kushungurudzika kwavo kunogona kudzikira .
(trg)="49"> VaKristu vakawanda vakafirwa vakaona kuti kuita mabasa ekubatsira vamwe kwakaita kuti vanyaradzwe zvikuru . ​ — 2 VaKorinde 1 : 3 , 4 .
(trg)="50"> Izvi handizvo zvinodzidziswa neBhaibheri .
(trg)="51"> Bhaibheri rinoratidza kuti rufu runokonzerwa nezvinhu zvitatu . ​ — Muparidzi 9 : 11 ; Johani 8 : 44 ; VaRoma 5 : 12 .